ग्रह शुक्र: Astronomical र ज्योतिष तथ्य विशेषता
ग्रह शुक्र सूर्य देखि दोस्रो भित्री। पुरातन समयका हुनाले यसलाई स्त्री सौन्दर्य र बुद्धिको प्रतीक मानिन्छ। हामी दुवै विकल्प विवरण हेर्न यस लेखमा यति ज्योतिष ग्रह, को Astronomical भिन्न हुन्छ।
ग्रह शुक्र: रमाइला तथ्य
भेनस - सौर प्रणाली को एक, deity को सम्मान मा नाम थियो। पुरातन रोमी स्त्री सौन्दर्य को आदर्श personified गर्ने भेनस नामको देवी, थियो;
यो एक स्थलीय ग्रह सम्बन्धित एक चिल्लो सेतो रंग आफ्नो सतह घेरने जो सल्फ्युरिक एसिड को बादलमा, कारण छ। यसको मापदण्डहरु (गुरुत्वाकर्षण र संरचना) द्वारा, यो धरती धेरै समान छ;
यसलाई कार्बन डाइअक्साइड हुन्छन् जो densest वातावरण, छ;
प्राचीन समयमा एक दिन भनेर विश्वास यो ग्रह छ गायब धेरै खुसीले गदगद र त समुद्रहरू, एकचोटि मा राखिएको, र आफ्नो ठाउँमा चट्टानहरु संग plitopodobnymi मरुभूमि गठन भएको थियो। यो परिकल्पना वैज्ञानिक प्रमाण छैन;
मा भेनस को सतह धेरै उच्च वायुमण्डलीय दबाव 92 पटक ठूलो ग्रह भन्दा छ;
यो आकाशीय शरीर । सूर्य पृथ्वीबाट 108 मिलियन किलोमिटर छ र दूरी 40-259 लाख मी बीच भिन्न हो।
त्यो एक रोचक छ माहौल, को संरचना जो एक ठूलो तूफान संलग्न र प्रति सेकेन्ड 120 मिटर एक गति मा यो आकाशीय शरीर वरिपरि rotates छ। किनभने भेनस यो बिजुली को - एक एकदम साधारण घटना (2 पटक प्राय धरती मा भन्दा), भनिन्छ जो "बिजुली ड्रैगन";
यो ग्रह को सतह मा तापमान - 477 डिग्री सेल्सियस।
भेनस को Astronomical विशेषताहरु
भेनस - सूर्य देखि दोस्रो ग्रह। यो छ, जो एक आकाशीय शरीर पार्थिव स्तर को 225 दिन भित्र बित्दै एक परिपत्र कक्षा, छ। यो रोचक कुरा यो कक्षीय गर्न विपरीत विपरीत दिशा मा यसको अक्ष वरिपरि rotates छ। यो ढिलो र उल्टो गति यदि तपाईं भेनस संग सूर्य देखो, यो rises र दुई पटक एक वर्ष सेट, र भेनस मा एक दिन 117 पृथ्वीमा बराबर छ भन्छन्।
यो ग्रह - सबैभन्दा पृथ्वीमा "अनुमानित" यो गर्न न्यूनतम दूरी (सौर प्रणालीमा अन्य ग्रह सापेक्षित) को लागि उपयुक्त छ किनभने - 45 लाख किलोमिटर ..
वातावरण thereon कारण गर्मी को संरक्षण बढावा जो कार्बन डाइअक्साइड बाक्लो तह कारण पनि हरितगृह प्रभाव तातो र सुख्खा छ।
राडार उपकरण, उपग्रहहरु, र अन्य प्राविधिक माध्यम प्रयोग गरेर डाटा पृथ्वी अवलोकन को माध्यम सङ्कलन, दिएको ग्रह खगोलविदहरु सुविधा। तसर्थ, "मैगलन" भेनस मा विशाल क्र्याटर को अर्थ छवि मा प्रसारित। आकाशीय शरीर को सतह, त्यहाँ धेरै धेरै ठूलो हो जो को ज्वालामुखियों, को एक प्रभावशाली संख्या द्वारा कवर छ3किमी को एक उचाइ पुग्नु। Eruptions किनभने विशिष्ट जलवायु को, अधिक बिस्तारै धरती मा भन्दा आउँदैन।
कसरी आकाश मा भेनस हेर्न?
यसको सजिलो कुनै पनि अन्य ग्रह भन्दा हेर्न। आखिर, यसको बाक्लो बादल सूर्य को रेज प्रतिबिम्बित र त यो उज्ज्वल देखिन्छ। पृथ्वी ग्रह देखि भेनस कहिल्यै सूर्य टाढा कारण आफ्नो कक्षा उहाँलाई नजिक थियो भन्ने तथ्यलाई गर्न Wanders। हरेक7महिना धरती गरेको आकाश मा सप्ताह को एक जोडी को लागि, तपाईं साँझ मा brightest वस्तु पश्चिमी आकाश मा देख्न सक्नुहुन्छ - भेनस। एक 3.5 महिनाको लागि, त्यो फिर्ता 3:00 गर्न पूर्व मा सूर्य अघि जान्छ। किनभने यस कारण आफ्नो काम मा अक्सर उनको भनिन्छ "साँझ" वा "बिहान" तारा। समय को यो छोटो अवधिमा, 20 पटक Sirius को प्रतिभा भन्दा बढी उनको दृष्टि को चमक (मा brightest तारा उत्तरी आकाश)।
भेनस र सूर्य को बीच कोण 47 भन्दा बढी ° कहिल्यै पुग्यो।
ज्योतिष मा भेनस
ज्योतिष समझ मा ग्रह शुक्र पुरातन मिथक देखि व्युत्पन्न छन् जो प्रतीकात्मक मान, को एउटा ठूलो छ। सबैभन्दा सामान्य प्रतिनिधित्व मा प्रेम, सौन्दर्य, कला संरक्षक प्रतिनिधित्व गर्छ।
एक व्यक्ति को Horoscope मा intellectually बलियो भेनस आफ्नो प्रिय आनन्द, आनन्द को वातावरणमा अस्वीकार र आनन्द को एक भावना दिनुहोस्। यो आवश्यक बलियो भावना र भावना द्वारा रंग छ जो कला मा आदर्श, गर्न मन को इच्छा दिन्छ।
शारीरिक ग्रह शुक्र को Horoscope मा एक मजबूत स्थिति मानव artistry, आकर्षण र शैली र सुरुचिपूर्ण शैली को एक जन्मबाट प्राप्त अर्थमा दिन्छ। बलियो भेनस संग एक मानिस एक बाक्लो तर लचिलो शरीर, सुरिलो अनुहार सुविधाहरू छ, अक्सर त्यहाँ dimples एक मुस्कान संग हो (विशेष गरी यदि भेनस को Ascendant मा)। बाल अक्सर छ सानो कर्ल मा रंग र दोब्र्याइएको मा प्रकाश।
भेनस कलात्मक कौशल विकास गर्न योगदान, व्यापारीहरू प्राचीन र इत्र सुरक्षित राख्दछ। भेनस significator को Horoscope को विश्लेषण मा व्यक्तिहरूलाई गर्दछ भने, व्यक्ति दिन जन्म भने, यसलाई यहाँ मतलब Mistress, पत्नी वा आमा।
नक्षत्र Cygnus खगोल विज्ञान र ज्योतिष
कराएको सपना मा - तपाईँको भनाइको अर्थ
अनुकूलता कन्या र प्रेममा धनु: को sexes को युद्धमा
पृथ्वीबाट यम गर्न दूरी, र थप रोचक ग्रह कुन हो?
को आन्द्रा मा ग्याँसहरु: के र कसरी व्यवहार गर्न के? किन लगातार आन्द्रा मा ग्याँसहरु संचित?
कोस्टा Daurada: ठाँउहरु र सौन्दर्य
नयाँ व्यवसाय को खोल्दै: एक पसल खोल्ने
Odintsov, अन्ना Sergeyevna, विशेषता
घाना गणतन्त्र: आकर्षण, फोटो
नदी माटोको के छ: सुविधा र उपयोगी गुणहरू